Noramgic Tram na-abịakwute Mersin | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinNostalgic Tram na-abịakwute Mersin
09 / 11 / 2019 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey, tram
nostalgic tram na-abịa myrtle
Obodo Mersin mepere emepe bidoro ịrụ ọrụ na Mersin Landscape Master Plan nke bụ nke mbụ na akụkọ obodo. Onye isi obodo Mersin Metropolitan Mayor Vahap Seçer'in malitere n’okpuru onye ndu ahụ, na-eburu n'uche echiche mgbanwe nke obodo mepere emepe.
Onye isi obodo nke Obodo ukwu, Seçer, zutere ndị na-ahụ maka ihe owuwu ala, ndị injin na-arụ ọrụ ugbo, ndị na-ahụ maka ya, ndị na-ahụ maka ime obodo na ndị isi sitere na Mahadum Mersin, ndị nwere ihe ha kwuru n'ọhịa ahụ site n'oge ọ malitere ọrụ. Ọ chọrọ ka ọrụ ahụ bido. N'akụkụ a, a bịaruru nso ọrụ ahụ. Site na Mersin Landscape Plan Plan, a na-ezube obodo ọhụrụ, ebe obibi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
A na-eme atụmatụ Mersin nke 20 nke afọ ga-eme n'ọdịnihu
N'ikwu na ha na-etinye oke mkpa na ntụgharị ihu dị na atụmatụ nke ga-eme n'ọdịnihu Mersin 20 kwa afọ ọdịnala na mpaghara nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Mayor Se ,er kwuru, tanesi Otu n'ime isiokwu m tinyere n'isi nke isi bụ ọdịdị nke obodo ahụ. Ahụike obodo ahụ bụ ihe omume metụrụ nwa amaala ahụ ozugbo. Onye ọ bụla mepere anya chọrọ ibi n'obodo a na-ahụkarị, n'obodo a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ karịa, ihe a na-ahụ anya mara mma ma na-achọ mma karịa. Mersin bụ obodo na obodo ọgbara ọhụrụ. Ọbụlagodi anyị nwere ụdị nkwupụta a. Ọ bụghị ebe anyị chọrọ ya, mana anyị ga-emepụta obodo ka mma. Anyị na-achọ ịmepụta obodo buru ibu nke nwere ọdịdị ya, usoro ya na ọgbara ọhụrụ ya. Ya mere, anyị na-eche banyere odida obodo ”.
Ndagwurugwu Mufti ga-adị ndụ
Nke mbu, aga akwadebe ihe omuma nke Mersin ma meputa oyuyo uzo ma n’uche ihu igwe omuma banyere oru ohia a ghabu iburu n’uzo nke atumatu a. N'ime usoro a, a na-eme atụmatụ iji ụdị ihe ọkụkụ na-eguzogide mmụba okpomọkụ na unwu ala, na nnukwu osisi ndo.
N'ime ọrụ a ga-arụ n'ime oke nke Mufti Valley Urban Design Project, nke a na-eme atụmatụ iche na oke nke atụmatụ ahụ, ebum n’obi ya bụ ime atụmatụ na-akwado usoro mbara igwe na usoro ihu igwe site na imepụta ụzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mpaghara ndịda-ndịda site na inweta na ịhazi mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndagwurugwu ahụ. N'ime oke ọrụ ọrụ ndagwurugwu ahụ, nke ga-agụnye ụzọ ndị na-agba ịnyịnya na kilomita 26, ụgbọ ala nostalgic na-ejikọ na mpaghara ahụ na-amalite site na Mersin Railway Station ga-ekpughe njirimara akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ.
Usoro nke Mersin, na-agbaso njirimara obodo nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-emepụta n'ime oke ọrụ a na-atụ anya imecha ngwa ngwa.
Metro na 15 Station na Mersin
Ngwá Ngwá Ọrụ Ọhụrụ Na-enweghị Ọhụụ Na-abịakwute Istanbul
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ na TCDD na-ahapụ ọrụ Mersin iş
Ebugo Aksaray ka a na-ebuga ya na Mersin site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Ministụ kwesịrị ịgbaso usoro Mmanu nke Mịkpe Uhie
Nchebe nke ndị Pedestrians nọ na Mersin iji nyefee ya
4 Mersin. Ngwukota ihe omuma nke otutu uzo n'okporo uzo
Enweghị mkpọtụ na Mersin
Mufti Valley Urban Design Project
Mersin Nostalgicram Nwere